> Resource > iPhone > Sida loo Helo u Khasaaray iPhone Xiriir
Waxa ugu dhibsado inaad lumiso iPhone waa dhammaan xiriirada tageen. Haddii aadan xiriir ah, aad uma sheegi karaa saaxiibada iyo qoysaska in aad laga badiyay telefoonka, iyo ma garan kartid doonaa oo heli doona telefoonka iyo waxa qofka samayn doonaa. Weydii qoyska lacag, ama aad dhib wac si aad saaxiibadaa? Ama iyaga ka mid ah waa mid aad u xun. Sidaa darteed, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo ka dib markii aad iPhone lumo ama la xado waa in ay dib u helaan xiriirada aad.
Sida loo helo badiyay xiriirada iPhone
Dhab ahaantii, marka aad u hagaagsan aad iPhone la Lugood, waxaa abuuraa file ah oo gurmad u ah qalab aad, oo waa nooc ka mid ah file SQLitedb. Guud ahaan, ma aad heli karto ama akhri si toos ah, laakiin qalab shawladda xogta saxda ah, aad Macdan kara waxa ku qoran waxaa ka, sida aad xiriirka la leedahay.
Hadda, si ay u hesho xiriirada iPhone laga badiyay, marka hore loo helo xiriir iPhone shawladda laga badiyay. Haddii aad weli ma u leedahay inaad doorato, waxaa jooga talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows), barnaamij wax ku ool ah oo awood aad ay dib u hanato ku jira oo dhan aad iPhone sida xiriirada, SMS, sawiro, videos, wac taariikhda, iwm, arrinta ma iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS, ama aaladaha kale ee Apple.
Download version maxkamada ee xorta ah ee barnaamijka hoose hadda.
Fiiro gaar ah: Waxaad kaloo isticmaali kartaa labada barnaamijyada si toos ah baarista iPhone si aad u hesho xogta aad tirtiray, markii qalab aad weli waa halkan.
Next, aynu hubi sida loo helo xogta iPhone lumay gurmad la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) in tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Sawirka record aad lumay iPhone aad Mac
Bilaabanaya barnaamijka aad Mac, doortaan kabsado Lugood hab kaabta File oo dhan gurmad Lugood ugu on your computer lagu soo bandhigi doonaa. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan si ay u bilaabaan soo saarida file gurmad ah.
Tallaabada 2. kabsado badiyay xiriirada iPhone
Scan ka dib, u guuraan ah "Xiriirada" category on galeeysid barnaamijka. Waxaad ku eegaan karo ku jira oo dhan faahfaahsan ee xiriirada aad ka hor soo kabashada. Sax off waxa aad rabto oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your Mac. Markaasuu iyaga waxa aad maamuli kartaa on your computer, ama iyaga dajiyaan in aad iPhone la Wondershare TunesGo .
Siyaabo waxtar leh loo ilaaliyo xogta iPhone aad
Sahlo feature habayn AutoLock ah;
Disable aad qori iPhone ee SIM sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah;
Ku rakib app iPhone-socod oo ah sida Raadi My iPhone;
Beddel sirta Lugood.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ayaa sidoo kale u oggolaadaan in aad si toos ah iskaan ceshan xogta ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS, marka aanad haysan gurmad Lugood ah.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka BlackBerry Geesi